Maya Mai Tai, ma jiro Vodka markii Maraykanku F22 Raptor Fighter Jets ay eryanayeen Ciidanka Cirka Ruushka 300 mayl u jirta Hawaii
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Maya Mai Tai, ma jiro Vodka markii Maraykanku F22 Raptor Fighter Jets ay eryanayeen Ciidanka Cirka Ruushka 300 mayl u jirta Hawaii
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Diyaaradaha dagaalka ee Raptor ayaa dul heehaabaya badda Pacific
Saddex dayuuradood oo F-22 Raptor ah oo Maraykan ah ayaa la geeyay Axaddii, Juun 13, 2021, iyagoo dul maray Badweynta Baasifigga. Diyaaradaha ayaa laga soo tuuray saldhigga Hawaii ee Hickam Air Force Base oo ku yaal Oahu si ay uga cabsiiyaan dagaalyahannada Ruushka oo ka durugsan xeebta Mareykanka ee Hawaii.
Ciiddanka Cirka ee Maraykanka waxay haystaan ​​Diyaaradda Dagaalka ee F-22 Raptor. Waa diyaarad jiilkii shanaad oo, ilaa maanta, loo tixgeliyo dagaal-yahanka ugu qarsoon adduunka.
Kala duwanaanshahani wuxuu aasaaska u dhigay dayuuradaha kale ee la midka ah si ay u raacaan, oo ay ugu horreeyaan sumcaddeeda:
F-22 wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee soo bandhiga aragtida radar-ka hooseeya, safar-aad-u-sarreeya, awood-sare, iyo shabakadaha dareemayaasha horumarsan. F-22 ayaa sidoo kale lahayd awood u-dirir-ku-dhow oo aan la tartami karin, in kasta oo aysan lahayn awoodaha doorka badan ee diyaaradaha dagaalka ee dhowaan.
Markii ugu dambaysay ee diyaaradani ay hawl gasho waxay ahayd Hawaii bishii June 13 -keedii ee sannadkan iyada oo ka jawaabaysa daandaansiga Ruushka oo 300 mayl u jirta Xeebta Waikiki.
F-22 Raptor waa diyaaraddii ugu cuslayd ee Ciidanka Cirka. Isku -darka qarsoodiga ah, ka -sarraynta, dhaq -dhaqaaqa, iyo isku -dhafka isku -dhafan, oo ay weheliso taageerid la hagaajiyay, waxay ka dhigan tahay boodbood ballaadhan oo ku aaddan awoodaha dagaalka.
Raptor-ku wuxuu fuliyaa hawlgallo hawo-ilaa-hawad iyo hawad-dhulkaba ah. Horumarka la taaban karo ee naqshadeynta kootada iyo isku -darka dareeraha ayaa hagaajinaya wacyiga xaaladda duuliyaha. Qaabeynta hawo-ilaa-hawada, Raptor wuxuu sitaa lix AIM-120 AMRAAM iyo laba AIM-9 Sidewinders.
F-22 waxay keentaa qarsoodi maalinta, taas oo awood u siineysa inaysan nafteeda ilaalin oo keliya laakiin hantida kale. Matoorada F-22 waxay soo saaraan riixitaan ka badan mishiin kasta oo dagaalyahan oo hadda jira.
Isku-darka naqshadaynta aerodynamic ee jilicsan iyo riixitaanka sii kordhaya ayaa u oggolaanaya F-22 inay ku safarto hawada sare ee hawada sare (in ka badan 1.5 Mach) iyada oo aan la isticmaalin dab-damis-dabeecad loo yaqaan supercruise.
Magacaabista diyaaraddu waxay ahayd F/A-22 muddo gaaban ka hor inta aan dib loogu magacaabin F-22A bishii Diseembar 2005.
Saraakiisha milatariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in diyaaradda F-22 ay ciriiri gelisay Axaddii, 13-kii Juun si ay uga jawaabto bambaanooyinkii Ruushka ee u socday meel u dhow hawada hawada Mareykanka. In kasta oo diyaaradaha dagaalka Ruushku aysan si dhab ah u gelin Hawada Maraykanka. Diyaaradaha Mareykanka ayaa markii dambe dib ugu laabtay saldhigoodii.
Markii hore, waxaa la sheegay in jawaabta milateri ay ahayd codsi ka yimid Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka (FAA) si loo sameeyo “roondo hawleed aan joogto ahayn”.
Bishii Juun 13, 2 Raptors waxaa bilaabay Taliska Indo-Pacific ee Xerada HM Smith amarkiisa hoose, Ciidamada Cirka Baasifigga, 154th Fighter Wing, oo ka yimid Hickam oo ku taal jasiiradda Oahu abbaare 4:00 galabnimo waxaana ku xigay Raptor saddexaad oo ku saabsan saacad kadib. Waxay u muuqataa in KC-135 Stratotanker-oo ah diyaarad shidaal siineysa-ayaa sidoo kale loo adeegsaday howlgalka, isagoo tilmaamaya xaqiiqda ah in diyaarad laga yaabo inay u baahneyd kaalmo shidaal.
Arrinta, oo aan wakaalad, diyaarad, ama wakiil millatari si faahfaahsan u sharraxin, ayaa la xalliyey oo 3 Raptors iyo KC-125 Stratotanker ayaa dib ugu soo laabtay saldhigga Hickam Airforce ee Jasiiradda Oahu.
Markii la weydiiyay, Afhayeenka FAA Ian Gregor wuxuu kaliya yiri, "Waxaan wada shaqeyn dhow la leenahay militariga." Ciidanka Cirka waxay leeyihiin F-22s, duuliyeyaal, ilaaliyayaal, iyo shaqaale hub wicitaan 24 saac maalintii Hickam si ay uga jawaabaan hanjabaadaha hawada ee jasiiradaha Hawaiian oo qayb ka ah howlaha digniinta difaaca hawada.
Runta ayaa soo baxday maalmo kadib markii si qarsoodi ah matoorada waaweyn ee raadinta loo tirtiro weydiimaha maqaallada ka hadlaya dhacdadan.
Waxa run ahaantii dhacay waxay ahayd in Ruushku uu sameeyay layliskii ugu weynaa ee ciidamada badda ee Badweynta Baasifig ilaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka - laga yaabee inuu furo dabaqa shirkii Biden-Putin ee Geneva. Layliga waxaa laga sameeyay oo kaliya 300 ilaa 500 mayl xeebta qoraxdu ka dhacdo ee Hawaii.
Toddobaad ka hor Ruushka ayaa diyaarsaday diyaarad dagaal oo nooceedu yahay MiG-31 si ay u raacdo diyaarad milatari oo Mareykan ah oo ay dul mareyso Barents, wakaaladda wararka ee RIA ayaa soo warisay iyada oo soo xiganeysa hadal ay soo saareen ciidamada badda ee Ruushka
Militariga Ruushka ayaa sheegay in diyaaradda Mareykanka lagu aqoonsaday inay tahay P-8A Poseidon diyaaraddii dagaalka ee Ruushkana dib loogu celiyey saldhiggeedii isla markii ay diyaaraddii Maraykanku leexatay oo ka dhaqaaqday xadka Ruushka, sida ay sheegtay RIA.
Badda Barents waa bad aan badnayn oo ka mid ah Badweynta Arctic, kuna taal xeebta woqooyi ee Norway iyo Ruushka waxayna u qaybsan tahay biyaha dhul-badeedka Norway iyo Ruushka,
Dabayaaqadii 2017, FAA waxay ka codsatay duulimaad taageero Hickam waqtigaas 2 F-22s ayaa loo diray si ay u raacaan diyaarad American Airlines ah oo ka timid California sababta oo ah rakaab isku dayay inuu xoog ku maro xagga hore ee diyaaradda. FBI -da ayaa rakaabkii xabsiga dhigtay markii ay soo dageen.
Garabka 154aad waa qayb ka mid ah Ilaalada Qaranka Hawada ee Hawaii laakiin wuxuu si firfircoon ula shaqeeyaa Ciidanka Cirka wuxuuna bixiyaa inta badan amniga jasiiradaha. Waxay leedahay duuliyeyaal F-22 ah oo wacaya 24 saacadood maalintii oo ku yaal Hickam si loogu helo jawaabo deg-deg ah khataraha iman kara jasiiradaha Hawaii.
Cutubyo badan oo duulimaadyada milatariga ah oo ku baahsan gobolka Baasifigga ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay tababbarka iyo hawlgallada waqtiga. Ciidanka Cirka ayaa dhowaan bilaabay inay ku faafiyaan diyaaradahooda hareeraha Baasifigga iyagoo duulimaadyo joogta ah ku taga garoomada hawada jasiiradaha fog.